Perou dia iray amin'ireo firenena telo lehibe indrindra any Amerika Atsimo. Ny iray amin'ireo singa manan-danja indrindra amin'ity fanjakana ity dia ny sisintaniny dia mirakitra faritra telo voajanahary sy klimika, noho ny famoizan'i Pero ny fahasamihafany amin'ny tany, ny zavamaniry ary ny biby. Ankoatra izany, manana lova ara-kolontsaina manan-karena i Pero, fomban-drazana maro be voatahiry, ary koa antokom-pinoana manan-tantara maro.
Tanàna fahiny tany Peroa
Iray amin'ireo tanàn-dehibe sy malaza indrindra ao Però i Lima, izay tsy ny renivohitry ny firenena ihany ankehitriny, fa ny karatra fandraharahana ihany koa. Ny tanànan'ny mpanjaka nentim-paharazana, natsangana tamin'ny 1535, dia nahavita niaro ny rafitr'ireo fanjanahantany hatramin'izao. Ny tena mahasarika ny tanàna dia ny kianja afovoan'ny Plaza de Armas, izay misy loharano vato tamin'ny taonjato XVII, ny Katedraly any Santo Domingo, izay misy ny sisa tavela amin'ny mpanorina an'i Lima Francisco Pissarro, ary koa ny maro hafa.
Ny renivohitry ny Empira Inca taloha, tanànan'i Cuzco, dia mahaliana manokana ireo mpizaha tany ao an-toerana. Io tanàna fahiny io, izay namorona ny taona 1200 taorian'i JK, dia antsoina hoe renivohitra archeologin'i Amerika. Ny lohasaha masina ao amin'ny Incas, ny seza vato ao amin'ny Inca, ny trano famakivakiana ara-javakanto Saksayauman - dia mitazona izany ho an'ny taranany ho an'ny tanàna fahiny.
Ny harena tena sarobidin'i Però dia tanàna fahiny tao Machu Picchu, iray amin'ireo toerana mahaliana indrindra eran'izao tontolo izao , izay any amin'ny tendrombohitra Urubamba. Vokatry ny fikarohana taonjato maro, dia nosokafana ilay trano malaza atao hoe Sun Gate, trano fijerena horonantsary an-joron'ny vato, tranobe, tempoly sy trano maro hafa.
Toerana hafa mahaliana ao Però ihany koa ny tanànan'i Morai. Ity tanàna ity dia malaza amin'ny sisan-javatra be ririnina fahiny, ary koa antokon'oliva misy endrika boribory izay mifanandrify amphitheater lehibe fahiny. Ao amin'ny tanin'ireny toeram-pitrandrahana ireny, voan'ny zavamaniry samihafa no hita, noho izany dia heverina fa karazam-pambolena an-tanimboly ao amin'ny empira ny Inca.
Ny maha-ao Però dia mendrika ny hitsidika ny tempolin'ny andriamanitra masoandro, antsoina hoe Coricancha. Ny tempoly natsangana tao Cusco tamin'ny 1438 dia rafitra mahafinaritra. Coricancha dia nanangana vatokely izay tsy nifototra tamin'ny vahaolana rehetra, fa ny anatiny dia voaravaka volamena sy vato sarobidy. Nandritra ny fotoana iray dia rava ny tempoly, ary nanangana ny Katedraly any Santo Domingo teo amin'ny toerany. Amin'izao fotoana izao, ny asa famerenana amin'ny laoniny dia tanterahina eto. Tsara ny manamarika fa na dia tsy ampy aza izy io dia tafavoaka velona tamin'ny fomba fijery tany am-piandohan'ny fiangonana, dia tsy mitsahatra mahatsikaiky ny fahalavorariany izany.
Any Cuzco, afaka mitsidika ny tempoly Jesuit ao amin'ny orinasa, izay nifarana tamin'ny 1688 ny fanorenana. Ao amin'ny fasan'ny tranoben'ny tempoly tsara tarehy, eo ambonin'ny varavarana fidirana, ny endriky ny tsiambaratelo tsy voafetra dia voasokitra. Ny ati-trano anatiny dia somary maizina, nefa toa manazava ny tara-masoandro, mandrakotra ny ravina volamena, ny alitara. Ny rindrina sy ny varavarankelin'ny tempoly dia voaravaka sary sokitra, ary ny rindrina dia karazana zavakanto manan-danja maro, anisan'izany ny sarin'ireo mpanakanto fanta-daza ao Però.
Musee ao Peroa
Eny ary, iza no tsy liana amin'ny fitsidihana ny Museum of Gold, izay ao Però ary ahitana ny fanangonana rakotra metaly sarobidy atolotra. Na, ohatra, ny Museum of Arts, izay manolotra ireo zavaboary noforonina nandritra ny 3000 taona. Ny fanangonana tsara amin'ny firavaka fahiny, seramika, ary koa ny fikarakarana fanao amin'ireo vahoaka fahiny ao Però dia azo jerena ao amin'ny Museum Larko.
Valam-pirenena ao Però
Na dia afa-po aza izy noho ny fahaiza-manaony ara-bola an'i Però, ny governemantan'ny fanjakana dia mikatsaka politikam-piaraha-miasa mavitrika. Ny valam-pirenena manan-danja indrindra ao amin'ny firenena dia ny tahirin'ny biosphere Manu sy ny tahirim-bokin'ny Tambopata-Kandamo, izay maneho karazana "ala atsimo" miaraka amin'ny biby sy biby isan-karazany indrindra. Ankoatr'izay dia mendrika ny hitsidika ny parcas nasionaly Paracas, Huascaran, Kutervo, Maididi, ary ny zandriny indrindra any Peru - Bahuaha Sonon.
Ampahany kely monja amin'ireo zava-tsarobidy izay mendrika ao Però. Nefa minoa ahy, rehefa avy nitsidika eto indray mandeha fotsiny ianao dia te hiverina eto indray.
Ny natioran'i Colombia
Sakafo mihinana legioma
Ny reniranon'i dirtiest manerana izao tontolo izao
Ibuprofen nandritra ny fitondrana vohoka
Afaho amin'ny vehivavy bevohoka
Inona no tsy azonareo lazaina amin'ny lehilahy eo am-pandriana?
Manomana tohatra iray amin'ny volo fohy
Sakafo pea miaraka amin'ny elatra manify
Sakafom-boankazo misy legioma
15 biby tsy manan-tsahala tokony ho hitanao
Salo, voa maina
Lehilahy 16 malaza amina fahamendrehana
Recipe for casseroles
Angelina Jolie rehefa maty?
Mofo ho an'ny fanesorana volo any amin'ny toerana akaiky
Nahoana no misy zaza mivezivezy ao amin'ny kibon'ny vehivavy bevohoka?
Sakafo misy ronono vita amin'ny ronono
Cytovir-3 - sirop ho an'ny ankizy